विविध Archives - Lumbini Mail Lumbini Mail
प्रधानमन्त्री के.पि. शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद विस्तारको तयारी गरेका छन । स्रोतका अनुसार गृह मन्त्रीमा खगराज अधिकारी र सञ्चार मन्त्रीमा पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाकी पत्नी नैनकला थापा,
हरिविष्णु ओली मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले जेठ १ गतेदेखि लागु हुने गरी मुसिकोट खलंगा बहुमुखी क्याम्पस,रुकुम पश्चिमको क्याम्पस प्रमुखमा नियुक्ति वैशाख २९ गते नै दिएता पनि जेठ २१ गतेका दिन २३ दिनपछि
। लुम्बिनी प्रदेशमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था भएपछि द्वन्द्वका समयमा घाइते तथा अपाङ्ग भएकाहरु लाभान्वित भएका छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलले द्वन्द्वकालमा विभिन्न कारणले घाइते तथा अपाङ्ग भएकाहरुलाई उपचारमा
शहीद कृष्णसेन इच्छुकमा छोटो अबधिका तालीम उद्घाटन
दाङ, २० फागुुन । घोराही स्थित शहीद कृष्णसेन इच्छुक बहुप्राविधिक शिक्षालयले छोटो अवधिका विभिन्न सिपमुलक तालीमहरुको उत्घाटन गरेको छ । स्थानीय बेरोजगार युवायुवतीहरुलाई व्यावहारिक सिप सिकाएर स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले आयोजना
संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति र शपथ रोक्न सर्वोच्चमा रिट (पूर्ण पाठ सहित )
काठमाडौँ, २० माघ । अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति एवम् शपथ ग्रहण रोक्नका लागि सर्वोच्चमा रिट निवेदन पेश गरेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले मंगलबार राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवास,
बालुवाटार घेराउदेखि मन्त्रीहरुलाई सार्वजनिक बहिस्कार गर्ने
काठमाडौं १६ माघ। संसद विघटनको विरोधमा आन्दोलनरत रञ्जित तामाङ पक्षका विद्यार्थीहरुले बालुवाटार घेराउदेखि मन्त्रीहरुलाई सार्वजनिक बहिस्कार गर्नेसम्मका कार्यक्रम तय गरेको जनाएका छन् । प्रचण्ड माधव नेतृत्वको नेकपा पक्षको विद्यार्थीहरु संगठनले
जुम्लामा आगलागी हुँदा ३० घर नष्ट
काठैकाठको घर बनाउने चलन रहेको जुम्लाको गोठी गाउँमा भीषण आगलागी भएको छ । सो आगलागीवाट ३० घर जलेर नष्ट भएका छन् । तिला गाउँपालिकामा पर्ने सो गाउँमा मंगलबार बेलुका आगलागी
काठमाडौं ११ फागुन । सरकारले सुदूरपश्चिमका केही जिल्लामा व्याप्त छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्ने अभियानलाई तीव्रता दिएको छ । छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्ने अभियानअन्तर्गत महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले आगामी
पशुपतिमा गाँजा, भाङ निषेध
काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले महाशिवरात्रिका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले बुधबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा कोषका सदस्यसचिव डा. प्रदीप ढकालले पशुपतिनाथमा हुने